Nzira yekukunda kweCannabis License - Canna Advisors pane Kukunda Zvikumbiro
Nzira yekukunda kweCannabis License neCanna Advisors
Unoda Kuhwina Cannabis License?
Ndinokunda Sei Cannabis License?
Inguva yekunyorera muIllinois uye kukwikwidza kunotyisa! Ndiine marezinesi makumi manomwe neshanu ekupa mubairo, pese pese mune chikumbiro kuverenga. Kunyorera rezinesi kuri kudhura, kukwikwidza, uye mune dzakawanda nguva imwe nguva mukana. Vhiki rino Miggy naTom vakabatanidzwa nenyanzvi Jay Czarkowski, Kuwana Partner pa Canna Advisors, kunyatsokurukura izvo chaizvo zvinoda kuti uve neshanduro inobudirira. Canna Advisors ine nhoroondo inoshamisa yekugadzira yekuhwina zvikumbiro kune vatengi vavo. Dzidza izvo zvinoita kuti uwane kuhwina application mune ino vhiki ino ndima:
Chii chinonzi Canna Advisors?
Iyo cannabis bhizinesi yekukurukurirana agency inoshanda mukugadzirwa kwe brand uye marezinesi kunyorera
Akakunda manyorero mumatunhu makumi matatu nematanhatu pamwe neGuam, Puerto Rico, neCanada
Yakatangwa naDiane naJay Czarkowski muna 2013
Inoshanda kunze kweBoulder, Colorado
Ndeapi masevhisi Canna Advisors Anopa?
Kukura & Kugadziridza
Nei Uchifanira Kubvunzana
Chikumbiro chinodhura, chikumbiro chesavhisheni chingave mumakumi ezviuru emadhora
Mamiriro epasi ari kukwikwidza zvinoshamisa
Vanopa mazano seCanna Advisors vane ruzivo uye hunyanzvi
Kutanga Matanho Ekuwedzera yako Mikana Yekukunda Rezenisi
Aquire imba inowirirana zvizere
Zadza makiyi mabasa evashandi
Iva nemhando yakasimba yemari nemari dzakawanikwa
Kuve uine timu yakazvipira kubudirira kwebhizinesi rako uye kushandisa kunogona kuwedzera mikana yekukunda chikumbiro. Zvikumbiro zvinodhura, zvinotemesa musoro, uye zvinoshamisa kuomesa. Chikwata chakatsaurirwa kumisa bhizinesi rako re cannabis kuti ibudirire inogona kuita zvishamiso zvekushandisa.